7 Automated Workflows ga-agbanwe gị Marketing Game | Martech Zone
7 Arụ ọrụ akpaaka nke ga-agbanwe egwuregwu ịre ahịa gị
Friday, December 10, 2021 Tọzdee, Disemba 9, 2021 Chinta Jain
Ịre ahịa nwere ike ịkagbu onye ọ bụla. Ị ga-enyocha ndị ahịa gị lekwasịrị anya, jikọọ na ha na nyiwe dị iche iche, kwalite ngwaahịa gị, wee soro ruo mgbe ị mechiri ire ere. Na njedebe nke ụbọchị, ọ nwere ike ịdị gị ka ị na-agba ọsọ marathon.
Mana ọ kwesịghị ịdị arọ, naanị megharịa usoro ahụ.
Automation na-enyere nnukwu ụlọ ọrụ aka irube isi n'ihe ndị ahịa na-achọ yana obere azụmaahịa na-adị mkpa na asọmpi. Yabụ, ọ bụrụ na ịnakwebeghị akpaaka ahịa, ugbu a bụ oge. Ka software akpaaka na-elekọta ọrụ na-ewe oge ka ị nwee ike ilekwasị anya na ọrụ ndị dị mkpa.
Kedu ihe bụ Automation Marketing?
Automation marketing pụtara iji ngwanrọ na-emezi ọrụ ahịa. Ọtụtụ ọrụ ugboro ugboro na ire ahịa nwere ike ịmegharị ya: mgbasa ozi mgbasa ozi ọha, ịzụ ahịa email, mkpọsa mgbasa ozi, na ọbụna mkpọsa ntapu.
Mgbe ọrụ ahịa na-akpaghị aka, ngalaba ahịa na-arụ ọrụ nke ọma na ndị na-ere ahịa nwere ike ịnye ndị ahịa ahụmahụ ahaziri iche. Akụrụngwa ahịa na-eduga n'ịbelata oke ego, nrụpụta dị elu, yana ịzụ ahịa na-abawanye. Ọ na-enye gị ohere iji obere akụrụngwa na-eto eto azụmahịa gị.
Nke a bụ ọnụ ọgụgụ dị mkpa ole na ole na akpaaka ahịa.
75% nke ụlọ ọrụ niile nakweere akpaaka ahịa
480,000 weebụsaịtị na-eji teknụzụ akpaaka ahịa ugbu a
63% nke ndị ahịa na-eme atụmatụ ịbawanye mmefu ego akpaaka ahịa ha
91% nke ndị na-ere ahịa kwenyere na akpaaka ịzụ ahịa na-akwalite ọganihu nke mgbasa ozi ahịa n'ịntanetị
Ịmejuputa akpaaka ahịa na-eduga na mmụba 451% na ndu ndị tozuru etozu-na nkezi
Mgbe ị na-arụ ọrụ ahịa, ị ga-enwe ike ịchụ ndị ahịa aka kpọmkwem, a na-ejikwa mmefu ego ịzụ ahịa gị nke ọma na nke ọma. Automation ahịa na-arụ ọrụ maka azụmahịa ọ bụla, ebe a bụ ụfọdụ usoro ịzụ ahịa nke enwere ike iji ngwa ọrụ rụọ ọrụ.
Usoro ọrụ 1: Nkuzi Nzụlite Automation
Dabere na nyocha, 50% nke ụzọ ị na-emepụta tozuru oke, ha adịbeghị njikere ịzụta ihe ọ bụla. Ha nwere ike inwe obi ụtọ na ị nwere ike ịchọpụta isi ihe mgbu ha wee nwee ike ịnweta ozi ndị ọzọ. Ma ha adịghị njikere ịzụta n'aka gị. N'ezie, naanị 25% nke ndị ndu dị njikere ịzụta ngwaahịa gị n'oge ọ bụla, nke ahụ na-enwe nchekwube.
Ma eleghị anya, ị nwetara ụzọ site n'ụdị Nwepu n'ịntanetị, atụmanya ahịa, ma ọ bụ ndị otu ịre ahịa gị nwetara kaadị azụmahịa na ihe ngosi ahia. Enwere ọtụtụ ụzọ isi mepụta ụzọ, mana nke a bụ ihe: naanị n'ihi na ndị mmadụ nyere gị ozi ha apụtaghị na ha dị njikere inye gị ego ha.
Ihe ndị ndu chọrọ bụ ozi. Ha achọghị inye gị ego ha tupu ha adị njikere. Yabụ, ihe ikpeazụ ị ga - eme bụ ịgwa ha, "Hey ụlọ ọrụ anyị nwere nnukwu ngwaahịa, gịnị kpatara na ị naghị azụta ụfọdụ!"
Ịzụlite ndu akpaaka na-enye gị ohere ịgafe ụzọ onye zụrụ ya n'ọsọ nke ha. Gị na ha na-akpakọrịta, nweta ntụkwasị obi ha, zụọ ngwaahịa gị, wee mechie ire ere. Automation na-enyere gị aka ịzụlite na ịnọgide na-enwe mmekọrịta na atụmanya ma na-eduga na-enweghị mbọ ahịa siri ike. Gị na ndị atụmanya na ndị ahịa na-emekọrịta ihe na ọkwa ọ bụla nke njem ịzụ ahịa ha.
Usoro ọrụ 2: Email Marketing Automation
Ịre ahịa email na-enyere ndị ahịa aka iwulite mmekọrịta na atụmanya, ndị na-edu, ndị ahịa dị adị, na ọbụna ndị ahịa gara aga. Ọ na-enye gị ohere ịgwa ha okwu ozugbo n'oge dabara ha.
A na-eche na ọnụọgụ ndị ọrụ email ga-eru Ijeri 4.6 na 2025. Ebe ọtụtụ ndị ọrụ email, ọ dị mfe ịhụ ihe kpatara nloghachi na ntinye ego sitere na ahịa email ji buru ibu. Nnyocha egosiwo na maka $1 ọ bụla a na-emefu na ahịa email, nkezi nloghachi bụ $42.
Mana ire ahịa email nwere ike ịdị ka igbu oge n'ihi na enwere ọtụtụ ihe ị ga-eme: chọọ atụmanya, soro ha na-emekọrịta ihe, zụọ ngwaahịa gị, zipu ozi-e, na soro. Automation nwere ike inye aka ebe a site na ịmegharị ọrụ ugboro ugboro metụtara njikwa mmekọrịta ndị ahịa, na-eme ka ahịa email rụọ ọrụ nke ọma.
Ngwá ọrụ akpaaka ahịa email nwere ike izipu ndị debanyere aha dị mkpa, ahaziri onwe ya na ozi oge. Ọ na-arụ ọrụ n'azụ, na-ahapụ gị ka ị rụọ ọrụ ndị ọzọ bara uru. Ị nwere ike izipu ozi-e ahaziri ahazi nye onye ọ bụla, site na ndị ọbịa ọhụrụ ruo ndị na-azụ ahịa ugboro ugboro.
Oru oma 3: Ngwaọrụ Ahịa Social Media
Enwere ndị ọrụ mgbasa ozi ọha mmadụ ijeri 3.78 n'ụwa niile, na ọtụtụ n'ime ha na-eji nkeji 25 ruo awa 2 kwa ụbọchị na mgbasa ozi ọha. Ya mere ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-eji mgbasa ozi ọha na eze zụọ ụlọ ọrụ ha.
Mgbe gị na ndị ahịa na ndị ahịa na-emekọrịta ihe na mgbasa ozi ọha, ị nwere ike ịgwa ha okwu ozugbo wee nweta nzaghachi ha. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ndị ahịa US na-eji mgbasa ozi ọha na eze jụọ maka ngwaahịa na ọrụ, yabụ inwe ọnụnọ mgbasa ozi siri ike dị oke mkpa.
Ma ọ gaghị ekwe omume iji ụbọchị ahụ dum na mgbasa ozi ọha na eze, na nke ahụ bụ ebe akpaaka na-abata. Ị nwere ike iji ngwá ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozi na-ahazi, ịkọ akụkọ, na ịnakọta echiche. Ụfọdụ ngwaọrụ akpaaka nwere ike dee ozi mgbasa ozi ọha.
Automation marketing social media na-ahapụ oge gị, na-enyere gị aka iso ndị na-eso ụzọ gị na-akpakọrịta ma jide ezigbo mkparịta ụka. Ị nwekwara ike iji akụkọ ndị ewepụtara mee atụmatụ maka ihe ị ga-ebipụta na mgbe.
Oru oma 4: SEM & njikwa SEO
O nwere ike ịbụ na ị nwere ọtụtụ iri ma ọ bụ narị narị ndị asọmpi, ya mere ọ dị ezigbo mkpa ịkpọsa n'igwe ọchụchọ. SEM (Search Engine Marketing) nwere ike itolite azụmahịa gị n'ahịa ahịa na-enwewanye asọmpi.
SEO (Search Engine Optimization) pụtara imeziwanye ebe nrụọrụ weebụ gị iji welie visibiliti ya maka ọchụchọ dị mkpa na engines ọchụchọ. Ka saịtị gị na-ahụkwu anya na nsonaazụ ọchụchọ, na-abawanye ohere gị nke dọta ndị ahịa na-atụ anya na ndị dị adị na azụmahịa gị. SEM na-enweta ego na nchọta isiokwu ezubere iche, ebe SEO na-enyere aka ịtụgharị ma jigide ụzọ ndị SEM na-emepụta.
Mgbe ị na-emezi SEM na SEO, ị na-ebelata ọnụ ọgụgụ nke ọrụ ntuziaka ị ga-arụ ma mee ka ọrụ ndị na-agwụ ike dị ngwa ngwa. Ọ bụ ezie na ịnweghị ike ịmegharị usoro SEM na SEO ọ bụla, enwere ụfọdụ ọrụ ị nwere ike ịmegharị iji nyere aka kwalite arụmọrụ.
Usoro SEM na SEO nwere ike ịmegharị ya gụnyere ịmepụta nyocha weebụ, nleba anya aha njirimara na njikọ ọhụrụ, atụmatụ atụmatụ ọdịnaya, nyochaa faịlụ ndekọ, atụmatụ isiokwu, na njikọ njikọ. Mgbe ejiri nlezianya jikọtara SEM na SEO, ha na-emepụta mgbasa ozi ahịa dijitalụ siri ike na nsonaazụ pụtara ìhè.
Usoro ọrụ 5: Ọdịnaya Marketing Ọrụ
Akara ukwu ọ bụla nwere otu ihe na-eme ka ọ gaa n'ihu: akụnụba bara uru na nke bara uru nke na-ejikọta ya na ndị na-ege ya ntị. Ịre ahịa ọdịnaya na-arụ ọrụ dị mkpa na mgbasa ozi ahịa dijitalụ na-aga nke ọma.
Ma ebe a bụ ihe. Naanị 54% nke ndị na-ere ahịa B2B na-eji ọdịnaya wulite ntụkwasị obi n'etiti ndị ahịa ha dị ugbu a. Ndị ọzọ na-agbalị naanị imeri azụmahịa ọhụrụ. Emela anyị ihe na-ezighị ezi, imeri azụmahịa ọhụrụ adịghị njọ, mana nchọpụta na-egosi na 71% nke ndị na-azụ ahịa na-agbanyụ site na ọdịnaya nke yiri ka ọ bụ ahịa ahịa. Yabụ, kama itinye oge buru ibu na-ere ndị na-atụ anya na ndị ahịa dị adị, ihe ị ga-eme bụ itinye aka na ha.
Ngwá ọrụ akpaaka ịre ahịa ọdịnaya nwere ike megharịa ma kwalite ọrụ ịre ahịa ọdịnaya ugboro ugboro. Ọ na-enyere aka melite arụmọrụ atụmatụ ịre ọdịnaya gị. Ị nwere ike ịchọpụta usoro kachasị ọhụrụ na ọdịnaya wee jiri ngwa maka ịmepụta echiche.
Site na usoro ịre ahịa ọdịnaya dị mma, ị na-ewulite ntụkwasị obi na ndị na-ege gị ntị, jikọọ na atụmanya na ndị ahịa, na-emepụta ụzọ, ma melite mgbanwe. Ịdịgide ọdịnaya na-enyere ụlọ ọrụ gị aka ịbụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi karịa, na-ewulite ntụkwasị obi n'etiti ndị ahịa, ma na-ewusi aha azụmahịa gị ike.
Oru oma 6: Njikwa Mgbasa Ozi Ahịa
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị na-enweta ole na ole ụzọ na ahịa agbadala, mgbasa ozi ahịa nwere ike ịrụ ọrụ ebube. Mgbasa ozi ahịa dị mma nwere ike ịkpalite mmasị ọhụrụ na azụmahịa gị yana ịkwalite ahịa. Agbanyeghị, mkpọsa na-aga nke ọma ga-enwerịrị nsonaazụ enwere ike ịtụnye - dị ka mmụba ahịa ma ọ bụ ajụjụ azụmaahịa karịa.
Njikwa mgbasa ozi ahịa na-agụnye ịkpachapụ anya na-eme atụmatụ na ime ihe omume iji wepụta nsonaazụ azụmaahịa dị mma. Ọ na-eme ka mkpọsa ahụ gbanwee ebumnuche ụlọ ọrụ ka ọ bụrụ ebumnuche ndị nwere ike ime nke metụtara mkpa ndị ahịa.
Automation njikwa mkpọsa ahịa na-eme ka ọrụ onye ahịa dị mfe. Dịka ọmụmaatụ, onye na-ere ahịa nwere ike megharịa ụzọ ọwara ụzọ. Mgbe atụmanya mezuru ụdị, a na-amalite usoro mbọ ahịa. Enwere ike izipu ozi-e na-akpaghị aka iji kwalite mgbasa ozi, arịrịọ maka azụmahịa, ma ọ bụ rịọ ire.
Oru oma 7: Atụmatụ na ahịa
Ihe omume ahịa na-ewe ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ozugbo nye ndị atụmanya na ndị ahịa dị ugbu a. Ọ nwere ike inye aka ịbawanye visibiliti ika n'ihu, n'oge, na mgbe mmemme ahụ gasịrị. Ihe omume nwekwara ike inyere ụlọ ọrụ aka ịmepụta ụzọ na ohere ọhụrụ. Ndị na-ere ahịa nwere ike ịkwalite otu ngwaahịa ma ọ bụ atụmatụ iji mee ka afọ ojuju ndị ahịa dịkwuo mma, ntinye aka, na njide.
Mana ihe omume ọ bụla na-aga nke ọma ga-emerịrị atụmatụ ma hazie nke ọma. Ngwá ọrụ na-arụ ọrụ nwere ike ikwe ka ndị na-ere ahịa megharịa usoro ahụ dum-site na ndebanye aha, nkwalite mmemme, na nzaghachi.
Mgbe ị na-eji ihe omume dị ka onye na-ere ahịa, ị na-enye ndị ahịa nwere ike ịmekọrịta mmekọrịta mbụ na ụlọ ọrụ ahụ ma nyere ha aka ịmata àgwà ya, ilekwasị anya na echiche ya.
Automation Marketing nwere nnukwu mmetụta
N'ahịa zuru ụwa ọnụ, ọ dị mkpa ka azụmahịa gị pụọ na igwe mmadụ. 80% nke ndị ọrụ akpaaka ahịa kọọ akụkọ nrịbawanye n'inweta ụzọ, na ọtụtụ azụmaahịa na-eji teknụzụ mee ka mbọ ahịa ha na-eme ka ọ dị irè karị. Akpaaka nwere ike inye aka jikwaa akụkụ ọ bụla nke mkpọsa ịre ahịa gị-site na mmalite ruo n'isi, na-eme ka usoro ahụ dum bụrụ nke enweghị nkebi na enweghị nsogbu.
Tags: akpaakaemail automation automationmmemme nhazi akpaakandu akukọ akpaakaakụrụngwa ahịaọnụ ọgụgụ akpaaka ahịa ahịastats akpaaka ahịaakpaaka mgbasa ozi ahịaahia ahianjikwa ppsearch engine ahịa akpaakasearch engine njikarịcha akpaakanjikwa njikarịcha search enginenjikwa ahịa ahịa ọchụchọebe aAmgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi akpaakaọnụ ọgụgụKedu ihe bụ akpaaka ahịa
Chintan Jain bụ onye na-ahụ maka ịre ahịa ngwaahịa na Usoro ọrụ Kissflow, ikpo okwu jikọtara ọnụ nke na-enyere òtù dị iche iche aka ijikwa ụdị ọrụ niile n'otu ebe. Chintan bụ ọkachamara n'ịre ahịa nke na-ede ọtụtụ ihe na isiokwu dị ka teknụzụ ebe ọrụ, njikwa ọrụ, na ebe ọrụ dijitalụ. Ọ na-arụsi ọrụ ike na-enye aka na azụmahịa na teknụzụ dị iche iche.
Weghachite: Otu esi echekwa ụlọ ahịa gị ma ọ bụ Shopify Plus na-akpaghị aka
Otu esi eme kalịnda ọdịnaya ire vidiyo